यिनी हुन् हेलिकप्टर उडाएर मानिसहरुको ज्यान बचाउने नेपालकी एक मात्र महिला उद्धार पाइलट – PathivaraOnline
Home > समाचार > यिनी हुन् हेलिकप्टर उडाएर मानिसहरुको ज्यान बचाउने नेपालकी एक मात्र महिला उद्धार पाइलट
यिनी हुन् हेलिकप्टर उडाएर मानिसहरुको ज्यान बचाउने नेपालकी एक मात्र महिला उद्धार पाइलट
admin July 30, 2019 समाचार	0
काठमाडौं, १४ साउन । ३१ वर्षकी प्रिया अधिकारी नेपालकी एकमात्र महिला उद्धार पाइलट हुन् । प्रिया सगरमाथाको उचाइभन्दा माथिको उचाइमा हेलिकप्टर उडाएर मानिसहरुको ज्यान बचाउँछिन् र त्यहाँ पुगेका सहयोगीलाई सहयोग गर्छिन् । प्रिया डाक्टर बन्न चाहन्थिन् तर एउटा भेटले उनलाई पाइलट प्रेरित गर्यो । उद्धार पाइलटको जुन जिम्मेवारी छोडेर आधा दर्जन युवतीहरु भाग्छन् उनले त्यही करिअर रोजेकी छिन् ।
हाइस्कुलको पढाइपछि म मेडिकल कक्षामा भर्ना हुनको लागि भारत ९आन्ध्र प्रदेश० पुगेकी थिएँ । त्यतिबेला भर्नाको प्रक्रिया चलिरहको थियो तर घरबाट फोन आयो । भर्नाको प्रक्रिया चलिरहेको थियो तर घरबाट फोन आयो कि आमाको स्वास्थ्य खराब छ । त्यपछि म फर्कनु पर्यो । आमालाई सन्चो भएपछि मैले काठमाडौंमै बुद्ध एयरलाइन्समा क्याबिन क्रुको जागिर गर्न थालें । त्यही क्रममा बीएस्सी गरे अनि एमबीए पनि । एक दिन कसैले मेरो दाइलाई आफ्नो साथीसँग भेटाए । उनी हेलिकप्टर पाइलट थिए । उनले मलाई साथमा उडानमा लैजान चाहे, म तयार भएँ । यो मेरो पहिलो हेलिकप्टर उडान थियो । घर आएर मैले आमासँग भनें बरु म ऋण लिन्छु तर पाइलट नै बन्छु । पहिलो उडानको ४ महिनापछि नै मैले हेलिकप्टर उडाउँदैछु ।
मलाई लाग्दैन कि कोही कसैलाई इन्स्पायर गर्न सक्छ । तपाइँले आफैं सब गर्नुपर्छ । मैले सोचेकी थिएँ कि पाइलट बनेरै छाड्छु । जसरी प्रियंका चोपडाले जीवन, बिहे, करिअर, विवादलाई व्यवस्थापन गरेकी छिन् म पनि त्यसरी नै व्यवस्थापन गर्न चाहन्छु ।
काठमाडाैँमै बग्छन् रगतकाे नदीजस्ता खाेला, किन भयाे यस्ताे ?
करिष्मा मानन्धरले हपार्दै डा सुरेन्द्र केसीलाई भनिन् ‘मुख सम्हालेर बोल्नुस्’
एकाबिहानै सल्यानबाट आयो अत्यन्तै दु:खद खबर,जिन्दगी को कुनै टुङ्गो छैन..हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेखी एक सेयर गरौ
वडाध्यक्षको कुकर्म ! आफै अध्यक्ष रहेको विद्यालयमा पढ्ने बालिकालाई …..
आमा मर्दै गर्दा रोएको अवस्था भन्दै सेल्फी फेसबुकमा अपलोड गरेपछी